လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကိုယ်လူချော အဖွဲ့အတွက် မြန်မာငွေကျပ်(၁၀)သိန်းကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေတိုး – GuGuGarGar
Shwe | May 13, 2020 | Cele | No Comments
ငယ်ရွယ်စဉ် ကတည်းက အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာတဲ့ မင်းသားချောလေး နေတိုးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ နေတိုးကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလို ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင် မှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီ သုံးဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် အနုပညာကြေးတွေထဲကမှ အလှူဒါန်းလေးတွေကို လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူတစ်ဦးပါပဲနော်။
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကိုယ်လူချော အဖွဲ့အတွက် မြန်မာငွေကျပ်(၁၀)သိန်းကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေတိုး
နေတိုးကတော့ အလှူဒါန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ သူရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ နေတိုးက “ ကိုလူချောများဆီသို့ အလှူငွေ ကျပ်(၁၀) သိန်း ကုသိုလ်အမျှရကြပါစေ” လို့ဆိုကာ သူရဲ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ အတွက် နေတိုးရဲ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း နေတိုးရဲ့ လှူဒါန်းမှုမြောက် အောင် နတ်လူ သာဓုခေါ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Soure…. Nay Toe’s Myday
ငယျရှယျစဉျ ကတညျးက အနုပညာ လုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျရငျး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိလာတဲ့ မငျးသားခြောလေး နတေိုးနဲ့ ပရိသတျတှကေို အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူး ထငျပါတယျ။ နတေိုးကတော့ ဇာတျကားတိုငျးလိုလို ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျ မှုတှကွေောငျ့ အကယျဒမီ သုံးဆုကို ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ သူဟာဆိုရငျ အနုပညာကွေးတှထေဲကမှ အလှူဒါနျးလေးတှကေို လုပျကိုငျလရှေိ့သူတဈဦးပါပဲနျော။
နတေိုးကတော့ အလှူဒါနျးလုပျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးပုံရိပျလေးတှနေဲ့ သူရဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ နတေိုးက “ ကိုလူခြောမြားဆီသို့ အလှူငှေ ကပျြ(၁၀) သိနျး ကုသိုလျအမြှရကွပါစေ” လို့ဆိုကာ သူရဲ့ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှေ အတှကျ နတေိုးရဲ့ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ပုံရိပျလေးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး နတေိုးရဲ့ လှူဒါနျးမှုမွောကျ အောငျ နတျလူ သာဓုချေါပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ Soure…. Nay Toe’s Myday